Laacibkii hore Barcelona Belletti oo ka warbixiyay fikirkiisa kaga aadan fursada uu Neymar ugu biirayo Real Madrid – Gool FM
(Barcelona) 19 Okt 2018. Laacibkii hore kooxda Barcelona Juliano Belletti ayaan meesha ka saarin suurtagalnimada uu Neymar Jr dib ugu soo laaban karo garoonka Cump Nou.
Juliano Belletti ayaa wareysi uu ku bixiyay radio “Cadena Ser” wuxuu ku sheegay in hadiiba uu xidiga kooxda PSG ee Neymar Jr dib ugu soo laabanayo gudaha dalka Spain uusan ku biiri doonin koox aan ka ahayn Barcelona.
“Waxaan qabaa in hadii uu Neymar Jr ku laabanayo dalka Spain kaliya wuxuu ku biiri doonaa kaliya kooxda Barcelona, sababtoo ah ma joogi doono PSG sanado badan”.
“Laakiin uma maleynayo inuu u dhaqaaqi doono Real Madrid, xiriirka Barcelona ee ciyaartoyda Brazil ayaa had iyo jeer waa kuwo gaar ah”.
” Arthur Melo waa ciyaaryahan tayo sarre leh, shakhsiyadiisa, wuxuu sameynayaa wax la mid ah waxa Xavi uu sameeyay, lakiin weli wuxuu u baahan yahay shaqo badan si uu u gaaro heerkiisa”.
Laakiin waraar dhawaan soo baxay waxay sheegayaan in maamulka kooxda Barcelona iyo Neymar Jr ay haatanba ka fikirayaan suurtagalnimada uu laacibka reer Brazil dib ugu soo laaban karo garoonka Cump Nou, wargeyska “Mundo Deportivo” ayaa sheegay in heshiiska uu dhici doono suuqa xagaaga ee soo aadan.
Tottenham Hotspur oo dalab qaali ah miiska u soo saartay kooxda Barcelona si ay kagala soo wareegto saxiixa…..